Nhau - Tsananguro pfupi yeEC fan
Fan yeEC chigadzirwa chitsva muindasitiri ye fan. Izvo zvakasiyana nevamwe vateveri veDC. Iyo haigone chete kushandisa DC magetsi magetsi, asiwo AC voltage magetsi magetsi. Voltage kubva DC 12v, 24v, 48v, kusvika AC 110V, 380V inogona kuve yepasirese, hapana chikonzero chekuwedzera chero inverter kutendeuka. Mota dzese dzine zero zvemukati zvinoriumba magetsi eDC, yakavakirwa-muDC kuenda ku AC, rotor chinzvimbo mhinduro, matatu-chikamu AC, zvachose magineti, ma synchronous motors.
Zvakanakira vateveri veEC:
EC mota iri DC isina brushless yekuchengetedza-isina mota ine yakavakirwa-mukati yakangwara yekudzora module. Iyo inouya ne RS485 kuburitsa interface, 0-10V sensor kuburitsa interface, 4-20mA kumhanya kudzora switch kuburitsa interface, alarm mudziyo kuburitsa interface uye tenzi-muranda chiratidzo kuburitsa interface. Chigadzirwa chine hunhu hwekukwirira kwehungwaru, simba rakanyanya kuchengetedza, kushanda kwakanyanya, hupenyu hwakareba, kudedera kwekudengenyeka, ruzha rwakaderera uye rinoenderera uye risingapindike basa:
Iyo isina brushless DC mota yakanyanya kurerutsa chimiro nekuti iyo yekuunganidza mhete nemabhurashi ekunyepedzera zvakasiiwa. Panguva imwecheteyo, kwete chete kugadzirwa kwemotokari kunovandudzwa, asi kuvimbika kwemakanika kweiyo mota oparesheni kunowedzerwa zvakanyanya, uye hupenyu hwebasa hwakawedzerwa.
Panguva imwecheteyo, iyo gapuro yemhepo magnetic density inogona kuvandudzwa zvakanyanya, uye iyo mota index inogona kuwana yakanakisa dhizaini. Iyo yakananga mhedzisiro ndeyekuti mota vhoriyamu yakaderedzwa uye huremu hwaderedzwa. Kwete izvozvo chete, zvichienzaniswa nedzimwe mota, zvakare ine yakanyanya kwazvo kudzora kuita. Izvi zvinodaro: Chekutanga, nekuda kwekukwirira mashandiro ezvigadzirwa zvemagineti zvechigarire, torque inogara iripo, torque inertia reshiyo, uye masimba emagetsi emota anovandudzwa zvikuru. Kubudikidza neyakagadziriswa dhizaini, marekisheni akadai senguva yeinertia, magetsi uye emuchina nguva zvinodzikiswa zvinogona kudzikiswa zvakanyanya, sezvo main indexes eeservo control performance akagadziridzwa zvakanyanya. Chechipiri, dhizaini yemazuvano magineti yemagineti wedunhu ine kukwana, uye kumanikidza kwechigarire magineti zvinhu zvakakwirira, saka iyo anti-armature reaction uye anti-demagnetization kugona kweinogara magineti mota inowedzerwa zvakanyanya. Iko kukanganisa kwekukanganisa kwakaderedzwa zvakanyanya. Chechitatu, nekuti zvachose magineti anoshandiswa pachinzvimbo emagetsi excitation, magadzirirwo excitation ichitenderera uye excitation remagineti munda ipfupi, uye vakawanda parameters akadai excitation nekubuditsa, excitation ichitenderera inductance, uye excitation ano vari ipfupi, nokudaro achidzikisa zvakananga controllable variables kana paramita. Kubva pane zviri pamusoro zvinhu, zvinogona kutaurwa kuti chinogara magineti mota ine yakanakisa kudzora.
Post nguva: Sep-24-2020
Simbi fan fan, Plastiki Fan Guard, Hvac Fan Anodhonza, 172mm Ac Axial Fan, Metal Grill Fan 80mm Chengetedza, 12cm Ac Axial Fan,